samurai on Wed Mar 10, 2010 10:30 am
MNL ပထမအကျော့ ပွဲစဉ်ဇယား
၁၄ . ၃. ၂၀၁၀ ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက် Vsမကွေး ဗထူးကွင်း
၂၀ . ၃ .၂၀၁၀ ဇေယျာရွှေမြေ Vs မကွေး သုဝဏ္ဏကွင်း
၂၇ . ၃ .၂၀၁၀ ရတနာပုံ Vs မကွေး ဗထူးကွင်း
၄ . ၄ .၂၀၁၀ မကွေး Vs ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် သုဝဏ္ဏကွင်း
၂၄ . ၄ . ၂၀၁၀ မကွေး Vs ဒယ်တာယူနိုက်တက် သုဝဏ္ဏကွင်း
၂ . ၅ .၂၀၁၀ မကွေး Vs နေပြည်တော် ဗထူးကွင်း
၁၇ . ၅ .၂၀၁၀ မကွေး Vs ဥဿယူနိုက်တက် သုဝဏ္ဏကွင်း
၂၄ . ၅ .၂၀၁၀ ဆောက်သမ်းမြန်မာ Vs မကွေး သုဝဏ္ဏကွင်း
၆ .၆ . ၂၀၁၀ ကမ္ဘောဇ Vs မကွေး သုဝဏ္ဏကွင်း
၁၂. ၆ . ၂၀၁၀ မကွေး Vs မနောမြေ သုဝဏ္ဏကွင်း
kokophone on Sat Mar 20, 2010 7:02 pm
မကွေး အသင်း၏ နည်းပြချုပ် ဖြစ်သူ ဦးကြည်လွင်က ၎င်းတို့ အသင်းသည် ဇေယျာ ရွှေမြေနှင့် ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းမှာ လူတစ်ယောက် အထုတ်ခံရ၍ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
“အကြိတ်အနယ် ရှိတဲ့ ပွဲကောင်း တစ်ပွဲပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က လူတစ်ယောက် အထုတ်ခံခဲ့ရ ပေမယ့် အဲဒါကြောင့် ရှုံးတာလို့ မပြော ချင်ပါဘူး။ ဘောလုံး ဆိုတာ တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း အပေါ် မှီခိုပြီး ကစားတဲ့ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ တစ်ယောက် အထုတ်ခံ ခဲ့ရလို့ အသင်းက နည်းနည်းတော့ အားနည်းသွား ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ တစ်ဘက် ဆိုက်မှာ ဖြစ်သွားတာကြောင့် အထုတ်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သေသေချာချာ မမြင်လိုက်ရ ပါဘူး။ ဒိုင်က ပွဲကို ထိန်းလိုက်တဲ့ သဘော လုပ်လိုက်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီပွဲ ရှုံးခဲ့ရတဲ့ အဓိက အချက်က ကျွန်တော်တို့ ဘက်က အခွင့်အရေး တွေကို အသုံးမချ နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ပယ်နယ်တီသာ ၀င်အောင် ကန်နိုင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော် ရှုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဦးကြည်လွင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပွဲစဉ်တွင် မကွေး နောက်ခံလူ ချီယိုမာသည် ပွဲချိန် ၈၄ မိနစ်တွင် နှစ်ဝါ တစ်နီဖြင့် အထုတ်ခံ ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း အထုတ် မခံရမီက မကွေး အသင်းသည် ဇေယျာရွှေမြေနှင့် အပြန်အလှန် ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးသွင်းခွင့် များလည်း အများအပြား ရရှိခဲ့သည်။ ဇေယျာ ရွှေမြေ၏ တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုး သည်လည်း ချီယိုမာ အထုတ်ခံ ရပြီးနောက် ၃ မိနစ် အကြာတွင် ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ပွဲစဉ်တွင် ချီယိုမာသည် အခြား နောက်ခံလူ တစ်ဦး ဖြစ်သော မန်ဆာနှင့် အတွဲညီညီ ခြေစွမ်းပြ နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဇေယျာရွှေမြေနှင့် မကွေး အသင်းတို့မှ ကစားသမားနှင့် နည်းပြများသည် ပွဲအပြီးတွင် အနည်းငယ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ဦးကြည်လွင်က “အဲဒီ ပြဿနာ ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အချက် ကတော့ ဇေယျာရွှေမြေ နည်းပြ (စတီဖန် ဟန်ဆန်) က ကျောနံပါတ် ၇ (လွင်ဦး) ကို နံပါတ် တပ်ပြီး ဆဲဆိုနေတာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နည်းပြ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး မလုပ်သင့် ပါဘူး။ အဲဒီမှာ စည်သူဝင်းက ဒေါသထွက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကျောနံပါတ်ကို ပြပြီးတော့ မင်း ဘာလုပ်ချင်လဲ ဆိုပြီး မေးတာပါ” ဟု ပြောကြား သွားခဲ့သည်။ ပွဲကြည့်စင် ပေါ်မှ မြင်ကွင်းအရ စည်သူဝင်းသည် ဇေယျာရွှေမြေ နည်းပြဟာ လက်ဟန် ခြေဟန် ဖြင့်လည်း ဆဲဆိုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
champion on Mon Mar 22, 2010 2:54 pm